SRAM လင်းယုန်မဆိုကောင်းပါသလား - သုံးသပ်ချက်များ
အဓိက > သုံးသပ်ချက်များ > Sram လင်းယုန်ပြန်လည်သုံးသပ် - အန္တိမလမ်းညွှန်
Sram လင်းယုန်ပြန်လည်သုံးသပ် - အန္တိမလမ်းညွှန်
တကယ်တော့၊ ၂၀၁၈ မှာကျတော့ 12-speed 50t ကိုချီးမြှင့်ခဲ့တယ်လင်းယုန်ကြယ် ၅ ပွင့်မှ ၄.၅ သည်၎င်း၏ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောကုန်ကျစရိတ်နှင့်ပြောင်းလဲမှုစွမ်းရည်ကိုအထင်ကြီးစေသည်။ ၂၀၂၀ မှာ Shimano ကြေငြာပြီးတဲ့နောက် ၁၂ ချက်မြန်နှုန်းမှာ ၅၁ သွားကက်ဆက်ပါလိမ့်မယ်အရှက်ကွဲခြင်း၎င်း၏အရှိန်မြှင့်လင်းယုန်52t မှဂီယာ။
ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေတဲ့ Eagle GX အဟောင်းသည်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သော Lunar Grey Eagle GX 12-speed ။ ဒါကမတူလား။ ပိုကောင်းတာပေါ့ အနီးကပ်ကြည့်ကြရအောင် SRAM ကသူတို့ရဲ့လင်းယုန်လိုင်းမှာ shifter lever နှစ်ခုကိုတကယ်ပေးပါတယ်။ တစ်ခုကတော့ကျွန်တော့်အတွက်တော့ GX မှာသင့်ကို standard shifter ပြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သူတို့မှာ e-bike version ရှိပါတယ်။
ဒါကတံဆိပ်ပေါ်မှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြခဲ့တာပါ၊ e-bik version ကတော့ SINGLE CLICK ဖြစ်တယ်ဆိုတာသိနိုင်တယ်၊ ဒါကလကမ္ဘာဖြစ်တယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒါဟာ ၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာထုတ်လွှင့်တဲ့ဗားရှင်းအသစ်ဖြစ်တယ်။ ၄၃၃၊ ၄၃၂၊ ညာဘက်မှာထိုင်ဝမ်မှာလုပ်ထားတဲ့တခြား SRAM Stuff တွေ၊ 2020 မှာ၊ ရက်သတ္တပတ် ၄၆ နဲ့တူတယ်၊ ဒီဟာတွေကဈေးအပေါဆုံးဖြစ်တယ်။ Eagle SX မှ XX1 သို့သူတို့ E-bikes အတွက်စံတစ်ခုနှင့်တစ်ခုနှစ်ခုပြောင်းကုန်ပြီလီဗာများကိုပေးသည်။ မှာယူတဲ့အခါမှာဖော်ပြချက်ဂရုတစိုက်ဖတ်ပါ။
ဒီ e-bike တံဆိပ်ကပ်ခြင်းအပြင်သေတ္တာနှစ်ခုသည်တူညီကြပြီး shift lever ကိုဒီအမြှုပ်အောက်မှာတည်ရှိသည်။ Shift lever ကိုဒီပုံသွင်းထားသောပလပ်စတစ်အောက်မှာထည့်သွင်းပေးထားပြီးအောက်မှာအရာနှစ်ခုတွေ့နိုင်သည်။ တစ်ခုမှာသင်၏ shifter ကိုတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည့် handlebar clamp နှင့် screw တစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ခုသည် SRAM တွင်သူတို့၏ထုတ်ကုန်အားလုံးနှင့်အတူပါ ၀ င်သည့်စာအုပ်ငယ်ဖြစ်သည်။
သူတို့ကိုငါပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါသူတို့ကမိုက်မဲတယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်၊ ဘာလဲဆိုတာမင်းမသိနိုင်လို့ပါ။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုထုတ်ပစ်လိုက်ရင်ဒါကသာမန် GX shifter ဖြစ်လို့ ebike ဗားရှင်းလောက်တော့အဲဒီကျောက်စာဒါမှမဟုတ်တောင်ပုံတစ်ပုံပဲရှိတယ်။ နှင့် E-MTB ဟုပြောလိမ့်မည်။ ဖော်ပြချက်မှာ Lunar ကိုကြားရတဲ့အခါ GX နှင့် X01 အတွက်စံသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီ Lunar မီးခိုးရောင်ကိုရည်ညွှန်းတဲ့အခါသင် XX1 ကိုရပြီးအရောင်တွေပိုများတယ်။ အခြားအရာအားလုံးကိုဒီလူမီနီယံလီဗာအပါအဝင်အနက်ရောင်ဖြင့်ခြယ်သထားသည်။
ဒီ shifter အသစ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ lever ခံစားမှုဟာအဟောင်းနဲ့တူတယ်။ မကြာခင်မှာသင့်ကိုကျဆင်းမှုငါးခု၊ နှစ်ခု၊ သုံး၊ လေး၊ ပုံမှန်အားဖြင့် SRAM နှင့်အတူရွှေ့ပြောင်းခြင်းသည်တစ်ခုပြီးတစ်ခုတစ်ခုဖြစ်သောကြောင့် click ကိုနှိပ်ပါ။ ထို့အပြင်၎င်းတို့သည် Zero Loss ဟုခေါ်သည်ကိုဆိုလိုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ Shimano XT နှင့် XTR အတွက် Instant Release ကိုဆိုလိုသည်။ ဤ GX တွင်အလားတူအရာတစ်ခုရှိသည်။
ဒါဆိုရင်ဂီယာလီဗာရဲ့ e-bike ဗားရှင်းကော။ ကောင်းပြီ၊ ဒီတစ်ခုကအခြားတစ်ခုကဲ့သို့ကြည်လင်ပြတ်သားသည်၊ သင်ဒီမှာကြားနိုင်သည်၊ သို့သော်ကြီးမားသောခြားနားချက်မှာဂီယာတစ်ခုတည်းကိုငါးခုမဟုတ်ဘဲတစ်ချိန်တည်းတွင်လျှော့ချနိုင်သည်။ ဒါကြောင့်ကက်ဆက်ကိုတစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်၊ သင်ဒီလိုလုပ်ခဲ့တယ်၊ တစ်ကြိမ်မှာမင်းက derailleur ကိုကက်ဆက်ထဲကိုထည့်ပြီး drivetrain တစ်ခုလုံးကိုမဖျက်ဆီးနိုင်ဘူး။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်ဂီယာလီဗာမှာဆက်တင်မရှိတော့ပါ။ သင် XXV သို့မဟုတ် X01 ကိုသွားပြီးလီဗာအနေအထားကိုရွှေ့ပြောင်းနိုင်ပါပြီ။ ကျွန်ုပ်၏ချန်နယ်တွင် X01 အကြောင်းဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်၊ ထောင့်မှာချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီဂီယာလီဗာဟာ ၁၂၂ ဂရမ်ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်မှာဒီစက်ဘီးအတွက်ဒီမှာရှိတယ်၊ ပုံမှန်ပြောင်းတဲ့လီဗာက ၁၂၂ ဂရမ်၊ နောက်တစ်ခုကတော့ပြောင်းရွေ့တဲ့လီဗာအဟောင်းက ၁၁၉ ဂရမ်အလေးချိန်ရှိတဲ့အတွက်အဟောင်းနဲ့အသစ်ကြားမှာ ၃ ဂရမ်ကွာခြားချက် ။
Shift လီဗာတွင်ထည့်သွင်းထားသည့်အတွင်းကြိုးကြိုးအရှည်မှာ ၂.၂ မီတာဖြစ်သည်။ သင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်းဤ shift လီဗာများ၌ထည့်ထားသောအိမ်များမရှိပါ။ အတွင်းပိုင်းကေဘယ်ကိုအစားထိုးဖို့ဆိုရင် 3mm လိုအပ်တယ်။ Allen key ကိုကိုင်ပြီးဝက်အူကိုဖယ်ရှားလိုက်ပါ။
စိတ်ဝင်စားစရာမှာယခု၎င်းကိုအလူမီနီယမ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၎င်းကိုပလပ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ အဖုံးကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီးအတွင်းပိုင်းကေဘယ်ကိုနှိပ်ရုံဖြင့်နောက်ဆုံးတွင်ဤသို့ရောက်လာပြီးအစားထိုးလိုက်ပါ။ သတိရရမယ့်တစ်ခုတည်းသောအချက်ကအဲဒါကိုတွန်းထုတ်ဖို့မကြိုးစားခင်အခက်ခဲဆုံးဂီယာကိုပထမနေရာထားပါ။
e-bike သီးသန့်ဂီယာလီဗာသည်တူညီနေသည်။ ယန္တရားကို ၁ ကလစ်မှကလစ်များစွာသို့ပြောင်းခြင်းသို့မဟုတ်အပြန်အလှန်ပြောင်းခြင်းရှိ၊ shifter အဟောင်းလိုပဲ၊ installation ဟာတော်တော်လေးအသေးအဖွဲလိုလို၊ Loctite အပြာလိုတယ်။ Handbar clamp ကိုမြင်နိုင်တာကြောင့်၊ grips တွေကိုဖယ်ရှားရမယ်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, သင်မြှုပ်လက်ကိုင်ရှိပါကသင်သည်သူတို့ကိုပယ်ဖြတ်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။
ထို့နောက်ညှပ်ကိုလက်ကိုင်ဘားသို့ဆွဲတင်ပါ၊ ဝက်အူသည်ပထမဆုံး ၀ င်သည်။ ထို့နောက်သင်သည် ၄ ​​မီလီမီတာအယ်လန်သော့ကိုရရှိပြီး၎င်းသည်ဂီယာလီဗာအိုးထဲသို့ ၀ င်သွားသည်။ ဟုတ်ပါတယ်, bark clamp ကို install လုပ်ခြင်းသည်အမျိုးမျိုးသောဘရိတ်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင့်တွင် SRAM ဘရိတ်ရှိပါကဤ shifters သည် matchmaker နှင့်လိုက်ဖက်သောကြောင့် matchmaker adapter ကို ၀ ယ ်၍ သင်၏ဘရိတ်တွင်ထည့်နိုင်သည်။ Shimano ငါကဲ့သို့သောဘရိတ်ကိုသုံးလျှင် သင်သည်ဤ SRAM shifters ပေါင်းစပ်ကြောင်း adapters ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ ဤသည်မှာ I-SPEC EV အတွက်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းကိုဆောင်းပါးဖော်ပြချက်တွင်စာရင်းပြုစုပါမည်။
ဤရွေ့ကားပြောင်းကုန်ပြီလီဗာ 10-52 သွားကက်ဆက်နှင့်အတူမိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါတိုးချဲ့အကွာအဝေး။ ဆိုလိုသည်မှာ ၅၂၀% သောအဆိုင်းကိုဆိုလိုသည်။ သို့သော်အလူမီနီယမ်အဖုံးနှင့်အရောင်အမျိုးမျိုး မှလွဲ၍ ဤပြောင်းလဲမှုလီဗာအသစ်များသည်အဆိုင်းဟောင်းများနှင့်တူညီပြီး 520% ​​မောင်းနှင်မှုနှင့် ၅၀၀% ဆိုင်းနှစ်ခုလုံးတွင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။ Range- Drivetrains၊ ကျွန်ုပ်ရုပ်သံလိုင်းပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်အသေးစိတ်ဆွေးနွေးခဲ့သည့်မူလလင်းယုန်။
GX shifters အသစ်များအဟောင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကသင်မည်သို့ထင်သနည်း အရောင် (သို့) အလူမီနီယံအဖုံးကြောင့်အသစ်ကိုအစားထိုးရန်သင်စဉ်းစားနေပါသလား။ အောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်များတွင်သင်ထင်သည့်အရာကိုကျွန်ုပ်အားအသိပေးပါ။ ဒီဟာကအသုံးဝင်တယ်ဆိုရင်မျက်နှာဖုံးပေါ်ရှိလူမှုမီဒီယာကိုစာရင်းသွင်းချင်တဲ့စိတ်ကိုမမေ့ပါနှင့်။ နောက်မှစောင့်ကြည့်ပြီးနောက်လာမည့်တိုင်အောင်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာသင့်ကိုတွေ့မြင်ရန်မျှော်လင့်ပါ။ တစ်ခါတည်းအကုန်သောက်!
SRAM Eagle သည် 12-speed သာလား။
GX ရော၊XX1 လင်းယုန်ဖြစ်ကြသည်၁၂-မြန်နှုန်း, 1x drivetrains ။ ကွင်းဆက်တစ်ခုတည်းရှိပြီးရှေ့ derailleur မရှိဘဲ၊ ဂီယာအကွာအဝေး ၅၀၀% ကျယ်ပြန့်သည့် ၁၀-၅၀ တန်ကက်ဆက်များကိုအသုံးပြုသည်။
မင်္ဂလာပါ။ Eagle drivetrain နှင့်9* 13-4t cassette တို့ကိုစစ်ဆေးစဉ်ကတည်းကကျွန်ုပ်ဤမေးခွန်းကိုမေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၁၁ သို့မဟုတ် ၁၂ အမြန်မောင်းကားသို့ပြောင်းသင့်ပါသလား။ ဒီတော့ဒီမေးခွန်းကိုဖြေရန်ကျွန်ုပ်၏အဆင့် (၉) ဆင့်ပါ။ SRAM မှမိတ်ဆက်ပေးသည့် Eagle နည်းပညာကသင့်အားသွား ၁၀ လုံးမှ ၅၀ အထိအထိကောင်းသောလှပသောကက်ဆက်တစ်ခုတွင် ၅၀၀% ပေးသည်။ ထိုအဘို့သင်တစ် ဦး XD ယာဉ်မောင်းလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။e* ၁၃ ကိုမကြာသေးမီက၎င်း၏ဈေးပေါသော ၉-၄၆ သွားများဖြင့်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ၁၁ ချက်မြန်သောကက်ဆက်တစ်ခုဖြစ်ပြီးသင့်အား ၅၀၀ ရာခိုင်နှုန်းအကွာအဝေးထက်နည်းနည်းပိုမြန်စေသည်။
ဂီယာဂဏန်းတွက်စက်ကိုကြည့်သည့်အရာ ၅၀၀% သည်အမှန်တကယ်တွင် 2x10-speed speedtrain ၂၄-၃၈t dual dual circuitring နှင့် 11-36t cassette နှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ ဒီ့နောက်နည်းနည်းကျယ်တဲ့ ၅၁၁% အကွာအဝေးနဲ့အတူe* ၁၃ ဆမြန်နှုန်းကဒီမှာအနိုင်ရတယ်။ နံပါတ်2သဟဇာတဖြစ်ရပါမည်။
Eagle အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးသည်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအဆင်ပြေစွာရှိပြီးကျွန်ုပ်၏ရောနှောမှုကိုတွေ့မြင်နိုင်သည်။ ဤနေရာတွင် drivetrain X01 shift lever ကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။ ထို့နောက်ငါ X01 ကွင်းဆက်ရှိသည်။ ထို့နောက်ငါ၌သင်၌ GX ကက်ဆက်နှင့် GX နောက်ကျော derailleur ရှိသည်။ ဒါကြောင့်သင် XO1, GX, XX1 အကြားမည်သည့်အရာကိုမဆိုရောထွေးနိုင်ပြီးအရာအားလုံးအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်။ Eagle အတွက်ကွင်းဆက်အသစ်တစ်ခုသင်မလိုအပ်ပါ။ သူတို့သည် cranks ကိုအသုံးပြုရန်အကြံပြုသော်လည်းယနေ့စျေးကွက်တွင် Shimano freewheel ဖြင့်အလုပ်လုပ်နိုင်သည့် 11-50t ရှိသော SunRace 12 speed speed cassette သည်သင့်အတွက်ဖြစ်သည်။
ဒါက XD freewheel လိုအပ်တယ်။ ၅၀၀ ရာခိုင်နှုန်းအကွာအဝေးအတွက်သင်ခန်းစာ ၁၁ ခုကိုရွေးချယ်ရန်ယခုသင်ဆုံးဖြတ်ပါကသင်၌ရွေးချယ်စရာများစွာရှိသည်။ ဒီမှာငါ့ရဲ့စက်ဘီးကို XTR သို့မဟုတ် Shimano shifter နဲ့တွေ့တယ်။ ငါ့မှာ RaceFace cranks ရှိတယ်၊ ငါမှာ KMC ကွင်းဆက်ရှိတယ်၊ ပြီးတော့မင်းမှာe* ၁၃ ကက်ဆက်ရှိတယ်၊ နောက် XTor Shimano XT M8000 နောက်ကျောလှည့်စားမှုရှိတယ်။
အဖြစ်မှန်ကတော့သင်သည်မည်သည့် 11-speed speed ကွင်းဆက်ကိုမဆိုသုံးနိုင်သည်။ ဤကဲ့သို့သော GS ဟုတ်မဟုတ်အလယ်အလတ်လှောင်အိမ်သို့မဟုတ် SGS ဖြစ်စေနောက်ဘက် derailleur တစ်ခုခုကိုသင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သင့်တွင် 11-speed SRAM မောင်းနှင်မှုတစ်ခုရှိပါက၎င်းကိုသင်အမှန်တကယ်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီး၎င်းသည်သင်၏ 9-46t ကက်ဆက်တွင်အလုပ်လုပ်နေ ဦး မည်ဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့် 11-speed cassette နဲ့ကပ်ဖို့သင်ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာအနည်းငယ်ရှိပါတယ်။ ဒါဆိုဒါက ၁၃ အမြှောက်နောက်တစ်မျိုးပေါ့။ နံပါတ်သုံးကုန်ကျစရိတ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်။
၁၁- မြန်နှုန်းကက်ဆက်တစ်ခုအတွက်သင်ကက်ဆက်တစ်လုံးသာလိုအပ်နိုင်သည်။ ငါသိတယ်၊ ဒါကစျေးပေါတဲ့ကက်ဆက်မဟုတ်ဘူး၊ ဒါကတကယ်စျေးကြီးတယ်၊ ဒါပေမယ့်သင်ဒေါ်လာ ၂၀၀ လောက်ဒါမှမဟုတ်ဒီထက်နည်းရင်ရနိုင်တယ်။ GX drive နှင့်အတူသင်ကက်ဆက်၊ ကွင်းဆက်၊ နောက်တွဲစက်ကိရိယာနှင့်ဂီယာလီဗာအတွက်ငွေအလုံအလောက်စုဆောင်းရန်လိုအပ်သည်။
သင်ပေါင်းထည့်လိုက်သောအခါသင်မြင်သည့်အတိုင်း GX သည်ဒေါ်လာ ၃၇၅ ခန့်သို့ရောက်သည်။ နံပါတ်လေးအမှတ်တံဆိပ်သစ္စာရှိမှုဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ရထားတစ်ခုလုံးကိုကားတစ်စီးကနေ ၀ ယ်တာဖြစ်နိုင်တယ်။
Eagle သည်အကွာအဝေး၊ ၀ တ်မှုန်ဝါးခြင်းနှင့်မျက်ရည်နှင့်အမြင့်ဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်အကောင်းဆုံးသောစနစ်တစ်ခုအဖြစ်တီထွင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအပြည့်အဝ powertrain ပါဝင်သည်။ 11-speed circuit နှင့် 500% သည် Mix-and Match Components များဖြစ်သည်။
သင်ပြောင်းချင်လျှင် Shimano drivetrain ကိုသုံးနိုင်သည်သို့မဟုတ် SRAM 11-speed အဟောင်းကိုပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။ တိုးချဲ့ထားသောကက်ဆက် (e * ၁၃) သို့မဟုတ်အခြားစျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်ပါသေးသည်။ ချဉ်းကပ်မှုနှစ်ခုလုံးတွင်အားသာချက်များရှိသော်လည်း SRAM တွင်စနစ်တစ်ခုလုံးရှိခြင်းကြောင့်၎င်းကို Eagle 12-speed သို့ပို့ဆောင်သည်။
ဒါကကျွန်တော့်ကိုအလုပ်လုပ်ဖို့နံပါတ် ၅ ပါ။ အင်ဂျင်နှစ်ခုလုံးကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဝက်လောက်အပြေးပြိုင်ပြီးပြီ၊ ငါအဲဒီမှာအံ့အားသင့်စရာနှစ်ခုလုံးကိုလေ့ကျင့်ခဲ့တယ်။ အံ့သြစရာတစ်ခုကကျွန်တော်ပြောနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီ ၉-၄၆ သွားကက်ဆက်နဲ့ပြောင်းရတာလွယ်ပါတယ်။
အကယ်၍ သင်သည်ကျွန်ုပ်၏ကက်ဆက်အမျိုးအစားသို့မဟုတ်ကိုင်တွယ်ပုံကိုကြည့်ပါက၎င်းသည် Shimano ကဲ့သို့ချောချောမွေ့မွေ့လည်ပတ်နေပြီးလုံးဝကွဲပြားမှုမရှိပါ။ သင်ပြောင်းလဲနေသည့်ကွဲပြားခြားနားမှုများကိုသင်ကျော်လွှားပြီးသည်နှင့် Eagle ကက်ဆက်သို့မဟုတ် Eagle ကက်ဆက်ပြောင်းလဲခြင်းသည်ကက်ဆက်နှင့်ကက်ဆက်နှစ်ခုလုံးအတွက်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးချောမွေ့သည်။ ဤ drivetrains နှင့်ပြနာများ - ကျွန်ုပ်သည်လက်ရှိစီးနေသည့် KMC ကွင်းဆက်ဖြင့် ၁၁ မြန်နှုန်းကွင်းဆက်တွင် ၄၂ စီးတွင်ကွင်းဆက်ကျသည်။ ကျွန်ုပ်သည် ၁x စနစ်များအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောချည်နှောင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုငါထင်သောဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးခဲ့သည်။
ပိုမိုသိရှိရန်ဖန်သားပြင်ပေါ်ရှိ link ကိုသာအသုံးပြုပါ။ Eagle Drivetrain တွင်ကျွန်ုပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုကြည့်ပါကဤနေရာတွင်အကြီးဆုံးကျဉ်းမြောင်း။ ကျယ်ပြန့်သော profile ဂီယာနှစ်ခုသို့ပြောင်းရန်ပြproblemနာတစ်ခုရှိကြောင်းသင်သိသည်။ ဒါပေမယ့်ပြောခဲ့တာတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာကလင်းယုန်နဲ့အမြန်နှုန်း ၁၁ ဆမောင်းကားကိုအကြားပစ်လိုက်တာပဲ။ ဒါကကျွန်တော့်ကိုနံပါတ် (၆)၊
မင်းဒီမှာတွေ့တာက GX ကက်ဆက်ပါ။ သို့သော်လင်းယုန်ကက်ဆက်အားလုံးသည်အလွန်ဆင်တူသည်။ ၄ င်းသည်ဂရမ် ၄၅၀ ဂရမ်ဖြစ်ပြီးအလူမီနီယံဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသွား ၅၀ ဖြင့်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
ကြာရှည်ခံမှု - မြင်ရဆဲဖြစ်သည်။ သို့သော်အခြားအွန်လိုင်းအစီရင်ခံစာများကိုယုံကြည်ရန်၎င်းကားမောင်းနှင်မှု၏ကြာရှည်ခံမှုမှာလုံးဝမဆိုးပါ။ အီး * ဆယ်ကိုဤအချက်အထိသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးနောက်ဆုံးသုံးလုံးဖြစ်သောအကြီးဆုံးဂီယာများကိုအလူမီနီယံဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ယခုအလေးချိန်သည် ၃၄၂ ဂရမ်သို့ရောက်ရှိလာပြီ၊ ၎င်းသည်အလွန်ကောင်းသည်၊ ဈေးအကြီးဆုံး Eagle အရာတစ်ခုပင်မထိနိုင်သည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်၊ အွန်လိုင်းတွင်သင်ဖတ်ပါကထိပ်တန်းသုံးခုသို့မဟုတ်လူမီနီယံဘီးသုံးခုထဲမှတစ်ခုတွင်အချိန်မတန်မီဝတ်ဆင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားချက်များ၊ ရှေးဟောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားသူများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။
၎င်းသည်သင်၏မောင်းနှင်မှုပုံစံနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းအပေါ်များစွာမူတည်သည်။ သို့သော်လင်းယုန် ၁၂ မြန်နှုန်းကိုတာရှည်ခံစေနိုင်သည်။ နံပါတ် ၇ သည်အမြင်အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်ပြီးလင်းယုန်ကက်ဆက်သည်ကြီးမားသည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တွင်အများဆုံးသောကက်ဆက်ဖြစ်သည်။ သို့သော် 29er တွင်သေချာပေါက်ကြည့်။ မရပါ။ ၉-၄၆ တန်နောက်ဘီးသို့မဟုတ် ၄၆ သွား max max ဂီယာသည် ၁၀ နှစ်သို့မဟုတ် ၁၁-၄၂ တန်ကဲ့သို့နှစ်အနည်းငယ်ကြာအောင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်မတူပါ။
ဒါကြောင့်မှန်ဘီလူးကe* 13 နဲ့ 11-speed ကိုသွားတယ်။ ဒုတိယနောက်ဆုံးစံသတ်မှတ်ချက်မှာပြဇာတ်၊ derailleur နှင့်ကွင်းဆက်ပြိုင်ပွဲများဖြစ်သည်။ ကွင်းဆက်ကြိုးတပ်ရန် - ဘောင်အသစ်များသည်များသောအားဖြင့်အများဆုံးသွားကို ၃၄ ကြိမ်အထိအများဆုံးစုဝေးခြင်းကိုကန့်သတ်သည်။
ဤကဲ့သို့သောအခြေအနေမျိုးတွင် 9-tooth sprocket သည် e13 ကိုပိုမိုမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းဖြင့်နင်းနိုင်သည့်စွမ်းရည်ကိုကမ်းလှမ်းရန်ခွင့်ပြုသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကွင်းနှင့်အကွာအဝေးအကွာအဝေးနှင့်အတားအဆီးများရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် ၃၄ သွားချည်ကြိုးသည် ၃၂ သွားကွင်းထက်မြေကြီးနှင့် ၅ မီလီမီတာသာပိုနီးသည်။ derailleur ကိုချိုးဖောက်ခြင်းသည်ဘယ်သောအခါမျှပျော်စရာမကောင်းသောကြောင့်ဘီးအရွယ်အစားဆွေးနွေးမှုကိုဖယ်ရှားရန်ဘီးဝင်ရိုးမှတိုင်းတာသည့်မြေသို့မည်မျှနီးကပ်သည်ကိုတိုင်းတာသည်။
ထိုအခါသူတို့ကသူတို့ derailleur ဆွဲကြိုး၏ရှေ့မှောက်၌တိုင်းတာ, ဘေးထွက်မှဝင်ရောက်စွက်ဖက်သည်မည်မျှဝေးတိုင်းတာပါလိမ့်မယ်။ ဤ XT GS ၏အမှု၌, Shimano မှ ၂၂ ဆင့်စင်တီမီတာမှ GS ၏ရှေ့လှည့်ယာဉ်များအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ကွင်းဆက်သည်အကြီးမားဆုံးသော cog သို့ပြောင်းလိုက်သည်နှင့်၎င်းသည် ၂ စင်တီမီတာသာထွက်သည်။
ဤနေရာတွင်အများဆုံးတိုးချဲ့မှုမှာ 9-tooth sprocket 11th gear ပေါ်တွင်ကွင်းဆက်တစ်ခုပါရှိသည်။ ၎င်းသည်လှောင်အိမ်၏အောက်ခြေတွင်နောက်ထပ် ၃ စင်တီမီတာအထိနောက်ထပ်တစ်စင်တီမီတာဝက်ပေါင်းထည့်သည်။ ၎င်း၏ပရိုဖိုင်းသည် ၃.၅ စင်တီမီတာဖြစ်သည်။
ဂီယာကွင်းဆက် ၁၂ ခုနှင့်အတူ ၅ စင်တီမီတာ (သို့) ၂ လက်မအနည်းငယ်ပိုထွက်လာသည်။ ထို့ကြောင့်လင်းယုန်သည် ၁.၅ စင်တီမီတာကျယ်။ လှောင်အိမ်သည် Shimano GS သို့မဟုတ်အလတ်စားလှောင်အိမ်ထက်ပိုရှည်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် Shimano ရှည်သောလှောင်အိမ်သို့မဟုတ် SGS ကိုအသုံးပြုပါက Eagle 12-speed length နှင့် ၅ မီလီမီတာအတွင်းတွင်ရှိသည်။ သို့သော် 9-46t အပေါ်ယေဘူယျရှင်းလင်းချက်နှင့်အတူဤတစ်ခုသည်အီး * ၁၃ ဆမြန်နှုန်းသို့သွားသည်။ ပြီးတော့သင်ကခြစ်နေပြီဆိုလျှင် 12-speed သည်အဘယ်ကြောင့်ငါ ၁၁- မြန်နှုန်း၌ ၅၀၀% ရနိုင်မည်နည်းဟုတွေးမိသည်။
မင်းရဲ့နောက်ဆုံးအမှတ်၊ နံပါတ် ၉ ဂီယာအချိုးကိုမင်းဆီပို့ပေးပါ ဦး ။ ငါအစောပိုင်းကဖော်ပြခဲ့တဲ့ 500% ဂီယာအကွာအဝေးကျနော်တို့တော်တော်လေးကောင်းစွာအသုံးပြု 2- လမ်း system ကိုဖုံးလွှမ်းကြောင်း။ နှစ်ဖက်ကိုဘေးချင်းယှဉ်ကြည့်ခြင်း၊ သွား ၃၂ ကြိုးကွင်းနှင့်လင်းယုန်နှင့် ၃၂ တန်ကွင်းဆက်နှင့်အတူ ၁၁ မြန်နှုန်း 9-46t ကိုကြည့်ခြင်းအတွက်အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်လာသည်။
အကြောင်းမှာနှစ်မျိုးလုံးသည်တူညီသောဂီယာအကွာအဝေးကိုဖုံးအုပ်ထားသော်လည်းဂီယာအကြားကွာဟချက်သည် 11-speed နှင့်ထက် 12-speed နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်။ ထိုအရာနှစ်ခုကိုစီးနေစဉ်လင်းယုန်ပေါ်တွင်ဂီယာအကြားပိုမိုကွာခြားမှုများကိုသတိပြုမိသည်ဟုမပြောနိုင်ပါ။ သို့သော်သင်၏စီးနင်းပုံစံပေါ် မူတည်၍ ၎င်းသည်အရေးကြီးပါသည်။ ဒါကြောင့် Eagl ကို win 12 speed ပေးမယ်။
ဒီတော့အဲဒီမှာသင်ရှေးရှေးသွားပါ။ ဂီယာခြေလှမ်းလိုက်ဖက်မှုနှင့်၎င်းတို့အကြားအကွာအဝေးအကြောင်းပြောခဲ့သည်၊ powertrain စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ကြာရှည်ခံမှုအကြောင်းပြောခဲ့သည်။ ဤဆောင်းပါးဖြင့်သင်၏အနည်းဆုံးသင်၏မေးခွန်းအချို့ကိုကျွန်ုပ်ဖြေဆိုနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
သင့်တွင်နောက်ထပ်မေးခွန်းများရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ အောက်ဖော်ပြပါထင်မြင်ချက်များတွင်ကျွန်ုပ်အားဆက်သွယ်ပါ။ ဤအပိုင်းများထဲမှမည်သည့်စျေးနှုန်းကိုမဆိုသင်စစ်ဆေးလိုပါကဖော်ပြချက်ရှိလင့်ခ်များကိုအသုံးပြုပါ။ အမြဲတမ်းဆောင်းပါးကိုကြိုက်နှစ်သက်ဖို့မမေ့ပါနှင့်
SRAM NX သို့မဟုတ် GX ပိုကောင်းသလား။
TheNXgroupset သည်ဘတ်ဂျက်စိတ်ထားရှိသောအုပ်စုတစ်စုနှင့်ပိုတူပြီးစျေးနှုန်းနှင့်စွမ်းဆောင်နိုင်မှုအချိုးအစားကိုပေးသည်။SRAM ၏ GXgroupset ကိုပိုမိုအာရုံစိုက်သည်ပိုမိုမြင့်မား၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများကို၎င်းတို့၏စက်ဘီးပေါ်၌အချို့သောအလေးချိန်ကိုသက်သာစေရန်ပိုမိုပေးဆပ်ရန်စီစဉ်ထားပြီးဘတ်ဂျက်နှင့်လိုက်လျောညီထွေမှုထက်စွမ်းဆောင်ရည်အနည်းငယ်ပိုပေးသည်။NXမြတ်နိုး။
SRAM လင်းယုန် NX
SRAM မှဂီယာ ၁၂ ခုပါ ၀ င်သည့်အဆင့်နိမ့်မော်ဒယ်ဖြစ်သော်လည်းယနေ့ခေတ်အလတ်စားတောင်ကြီးတောင်ငယ်များ၏စျေးကွက်များတွင်မူဤသည်မှာဘုံကမ်းလှမ်းချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီမှာကျနော့်အမြင်တွင်, Shimano Deore ကြီးမားတဲ့ယှဉ်ပြိုင်မှုဖြစ်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်လောက်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ဒီ powertrain ကိုဘာကြောင့်အနီးကပ်လေ့လာပြီးဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ upgrade ပြissuesနာတွေနဲ့သူကပိုစျေးကြီးတဲ့ Eagle အစိတ်အပိုင်းများနဲ့ဘယ်လိုနှိုင်းယှဉ်သလဲဆိုတာကိုမပြောသင့်ဘူး။
SRAM ရဲ့ GX အသစ်ကိုမိတ်ဆက်လိုက်တာနဲ့ဒီအရာအားလုံးဟာခေတ်နောက်ကျသွားပြီဆိုတာကိုတော့ပြောစရာမရှိပါဘူး။ XO1 နှင့် XX1 ဘာသာပြန်နှုန်းသည် ၅၂၀% ရှိသည်။ NX ကိုလွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ခန့်ကပိုမိုသက်သာသည့် GX option တစ်ခုအဖြစ်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် shifter ကိုကြည့်သောအခါသိသာထင်ရှားသည်။ ဒီဟာဆေးသုတ်ထားပြီးစျေးပေါတယ်။
သူတို့ကနည်းပညာတူတူပဲ၊ Eagle ကဒီမှာရေးထားတာကိုခင်ဗျားမြင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒီအောက်ဘက်ရှိလှေကိုပလပ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးသင်မြင်နိုင်သလိုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိသည်။ အခြား GX သို့မဟုတ် X01 / XX1 နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ အဖုံးကိုပလတ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအတွင်းပိုင်းကေဘယ်ကြိုး ၀ င်သည့်နေရာကိုရာဘာအသေးငယ်တစ်ခုအောက်တွင်တည်ရှိသည်။
အလုပ်လုပ်သောရှုထောင့်မှကြည့်လျှင်၎င်းသည် GX နှင့်အလွန်ဆင်တူသော Eagle shifter ကဲ့သို့ဖြစ်သည်။ ငါကုန်းကုန်းပြင်လွယ်ကိုတကယ်မခံစားရဘူး၊ ဒါပေမယ့်သင် Shimano ကမ်းလှမ်းမှုကိုနှစ်ဆတိုးချင်တယ်ဆိုရင်၊ ငါ့ဆောင်းပါးတွေထဲကနေသင်ဟာဒီ shifter ကို Shimano 12-speed Shiftter နဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းအစားထိုးနိုင်ပြီးအဆင်ပြေမယ်ဆိုတာသိပါတယ်။ Cranks သည် GX သို့မဟုတ် SX cranks နှင့်အလွန်ဆင်တူသည်။ သူတို့အားလုံးသည် DUB အောက်ခြေ bracket နှင့် chainrings အသစ်ကိုအသုံးပြုသည်။ X-SYNC2။ တူညီသည်။ သင်လိုချင်လျှင် XX1 နှင့်အပြန်အလှန်ဖလှယ်နိုင်သည်။ သင့်ရဲ့ကွင်းဆက်လိုင်းဒီကွင်းဆက်အားဖြင့်ဒီနေရာကိုပေးထားသည်။
ဒါကြောင့်မင်းက 3mm ဒါမှမဟုတ် 6mm ကို boost ဒါမှမဟုတ် non-boost frames တွေရနိုင်တယ်။ ငါ SRAM cranksets, တိုက်ရိုက် mount ကွင်းဆက်ကွင်းများကြိုက်တယ်, တပ်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်, သင်သည်ဤ drive ကိုအခြမ်းကိုဖယ်ရှား / install လုပ်ရန် 8mm hex နှင့် 54Nm ဒီနေရာမှာမြင်နိုင်ပါသည်။ ဒီမှာ drive မဟုတ်တဲ့ဘက်မှာတော့ spindle ထဲက backlash ကိုဖယ်ထုတ်ပြီး BB 92 နဲ့ ၀ င်တဲ့ကြား ၀ င်မှုကိုတွေ့နိုင်တယ်။
DUB ၏တန်ဖိုးသည်မည်သည့် BB စံဘောင်တွင်မဆိုတပ်ဆင်နိုင်သည်။ သင်အလေးချိန်ကိုစိတ်ထဲမထားဘူး၊ ငါသာ fancier တစ်ခုသို့မဟုတ်ဘဲဥပုံကွင်းဆက်ရရုံကဲ့သို့အသုံးပြုလိမ့်မယ်။
NX ကွင်းဆက် - Eagle SX သည်အတူတူဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အလွန်အားနည်းသည်။ အပြင်ဘက် tab ကိုဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အက်ကြောင်းတစ်ခုကိုတွေ့နိုင်တယ်။ Links တွေကိုဒီကွင်းဆက်မှာအရင်ကချိုးဖောက်ခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်သင်ဒီမှာမြန်ဆန်တဲ့လင့်ခ်ရှိနေတယ်၊ ​​နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်။
လင်းယုန်ကွင်းဆက်များနှင့်ပတ်သက်သောကောင်းသည့်အချက်မှာ၎င်းတို့သည်အပြန်အလှန်ဖလှယ်နိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်လက်၌အစားထိုးခြင်းခံရလိမ့်မည်။ ကျွန်တော် NX အာမခံအတွက်မသွားဘူး ငါ Eagle GX ကွင်းဆက်ကိုပိုကောင်းအောင်ရွေးချင်တယ်၊ ပိုကောင်းသေးတယ်၊ X01 / XX1 လိုမျိုးပိုကောင်းပြီးကြည့်ရတာပိုကြာရှည်ခံသည်။
ဒီတော့ခင်ဗျားကဒါကိုသေချာမသိသေးဘူးဆိုရင်၊ ငါဟာဈေးချိုတဲ့လင်းယုန်ကွင်းဆက်ရဲ့ပရိသတ်မဟုတ်ပါ။ Derailleur - ဂရပ်ဖစ်တွေအပြင်၊ နောက်မှသင်တို့ကိုငါပြ ဦး မည့်အဖြစ်ဖော်ပြရမယ့်အခြားကွဲပြားခြားနားမှုအချို့ရှိသေးတယ်။ ဒါပေမယ့်မင်းဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် derailleurs နှစ်ခုဟာတူညီနေတယ်၊ ​​လက်တွေကအတူတူပဲ၊ SRAM လင်းယုန်အဘို့အရာတော်တော်လေးပုံမှန်ပါပဲ။ သင်ဤပြဇာတ်ကိုဖယ်ရှားလိုပါကအောက်ပါဖော်ပြချက်တွင်ကျွန်ုပ်တင်ပြမည့် XX1 သို့မဟုတ် X01 အစိတ်အပိုင်းများကိုသုံးနိုင်သည်။ ဤအလယ်ပိုင်းအပိုင်းတွင်ရှေ့ဘောင်သည်အတူတူဖြစ်သည်၊ သို့သော် NX တွင်နောက်ကျော panel ကိုသတ္တုဖြင့်ပုံနှိပ်ထားသည်။ အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ derailleur ကိုလမ်းကြောင်းရှိဌာနခွဲတစ်ခုပေါ်တွင်သင်ဖမ်းမိပါက၎င်းသည်ကွေးနေသောအရာ ဖြစ်၍ သင်၏လည်ပင်းကိုအသုံးမပြုနိုင်ကြောင်းတွေ့ရလိမ့်မည်။
GX ကိုအားကိုးတာပိုကောင်းတယ်။ Jockey Wheels - အသွင်သဏ္orာန်သို့မဟုတ်သွားပရိုဖိုင်းသည် X01, GX နှင့် ပို၍ စျေးကြီးသောအရာများနှင့်တူညီသော်လည်းဂျော်ကီဘီးများက၎င်းတို့ကိုပိုမိုပျော့ပျောင်းစေပြီးပိုမိုတင်းကျပ်စေသည်။ ဤနေရာ၌လုံးဝကစားခြင်းမရှိကြောင်း Eagle NX နှင့်မတူသည်မှာ၎င်းတို့သည် SLX နှင့် Deore derailleurs ရှိ Shimano's နှင့်ဆင်တူသည့်ချုံပုတ်များဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည့် Eagle NX နှင့်မတူသည်။
လင်းယုန်အစိတ်အပိုင်းများအားလုံးတွင် SRAM မှအသုံးပြုသော NX သည် ၃ roller bearing clutch အမျိုးအစားကိုအသုံးပြုသည်။ သို့သော်များစွာသောသူတို့က clutch သည်အားနည်းနေသည်ဟုပြောကြသည်။ ရှေ့ derailleur ကို Shimano ဖြင့်အစားထိုးရန်နောက်ထပ်ကြီးမားသောအကြောင်းရင်းတစ်ခုကသင်အား clutch ကိုချိန်ညှိနိုင်သည်။ ငါ၌ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ပတ်သက်။ ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရှိသည်, ငါ့လိုင်းပေါ်မှာ။
SX ရှေ့ derailleur ကစျေးသက်သာတယ်။ ၎င်းသည်သံမဏိနှင့်ပလပ်စတစ်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး၎င်းသည်လေးနက်သောတောင်တက်စက်များအတွက်သင့်တော်သည်ဟုမထင်ပါ။ ဆိုလိုတာက derailleur ရဲ့ပလပ်စတစ်ကိုယ်ထည်ထဲကိုချည်ထားတဲ့ညှိနှိုင်းမှု screw နှစ်ခုကိုကြည့်ပါ။ ထို့ကြောင့်သင်၏ NX သို့မဟုတ် SX derailleur တွင်ပြproblemsနာများရှိပါက SLX သို့မဟုတ် Shimano deorederailleur ကိုအစားထိုးရန် GX သို့သို့မဟုတ်စတီယာရင်လက်သို့မဟုတ်အခြားအရာများအစားထိုးရန်အကြံပြုလိုသည်မဟုတ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်ကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်။ ၎င်းသည်အလုံးစုံစျေးသက်သာသည်။ ။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားသံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော NX နှင့် SX ကက်ဆက်ဆီသို့ပို့ဆောင်ပေးသည်။ အလေးချိန် ၆၀၀ ဂရမ်မှ ၅၀ ဂရမ်မှ SRAM သည်၎င်း၏ ၁၀-၅၂ တန်ကက်ဆက်များကိုစတင်မိတ်ဆက်ပြီးကတည်းကယနေ့ခေတ်ကုန်သွားပြီဟုပြောနိုင်သည် ။ သို့သော်၊ အကယ်၍ သင်ဤအရာများကိုကြည့်ပါကသူတို့၏ 52s ပုံသဏ္theာန်သည် NX 50 သွားနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်ကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအချက်မှာကက်ဆက်တွင်ကောင်းမွန်သော ol 'Shimano freehub body၊ HG သို့မဟုတ် Hyperglide ကိုအသုံးပြုသည်။
ဒါဟာဂီယာအကွာအဝေးများအတွက်အတူတကွ riveted သောနောက်ဆုံးလေးခုမှလွဲ။ သင်တစ် ဦး လက်စွပ်တစ်ချောင်းနှင့်လျော့ရဲရဲဂီယာကိုအသုံးပြုသည်, သင် 450 ကျော်ကျော်နှင့်အတူအဆုံးသတ်။ နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်အဆင်ပြေသရွေ့ဤအရာသည်ပြီးပြည့်စုံသော 12 သင်တန်းအဆင့်မြှင့်တင်မှုလမ်းကြောင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ချန်နယ်ကိုစမ်းသပ်ခဲ့သော SunRace MZ90 သည်ဤကက်ဆက်အတွက်အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒါမှမဟုတ်ငါအသစ်က Shimano Deore M5100, 11-speed, 11-51t ထင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်သင်က ၁၂ မြန်နှုန်းမှာအမြဲရှိနေတဲ့ဒီနေ့ခေတ်မှာ ၁၁ မြန်နှုန်းကိုဘယ်သူကဂရုစိုက်သလဲ။ ပိုပြီးအကွာအဝေးကိုခံစားနိုင်ပါသလား? မင်းဘာကိုဆိုလိုတာလဲ ဒီမှာ GX ကွင်းဆက်အသစ်တစ်ခုနဲ့ဆိုင်တဲ့ဆိုင်ကယ်ရပ်နားမှုမှာကွင်းဆက်အသစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာအများအပြားသင်တန်းများ။
GAM နဲ့ဆင်တူတဲ့ SRAM Eagle စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်အလွန်ပုံမှန်ပြောရမယ်။ အဆိုပါ drive ကိုလမ်းကြောင်းကနေဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်ခဲ့ပေမယ့်ဂီယာအနည်းငယ်အကြားပြောင်းတဲ့အခါငါအနည်းငယ်မဆိုင်းမတွသတိထားမိခဲ့ပေ။ ငါသူတို့ကိုလိုအပ်တဲ့အခါဂီယာတွေရှိခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါအရင်ကငါသုံးခဲ့တဲ့အရှိဆုံးအလျင်မြန်ဆုံးနဲ့အလျင်မြန်ဆုံးအပြောင်းအလဲမရှိတဲ့မောင်းနှင်မှုမဟုတ်ဘူး။
ကောင်းပြီ, ဒါကြောင့်ငါ Eagle NX ၏အဘယ်သို့ထင်သနည်း ကောင်းပြီငါအသစ်ကိုမဝယ်ဘူး၊ သေချာတာပေါ့၊ အဲဒါကို Eagle SX cranks တွေထက်ပိုကြိုက်လိမ့်မယ်။ ချည်နှောင် - ငါဘယ်လိုချက်ချင်းဖယ်ရှားပစ်ရလိမ့်မယ်။ မင်းဒီမှာမြင်ရတဲ့ circuit ဟာရှုပ်ထွေးနေတယ်။
ဒါဟာအားလုံးလေ့ကျင့်ရေးဘီး၌ကစားနှင့်ဒီမှာလက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကျိန်းသေကြောင်းပြတ်သားသို့မဟုတ်ချောမွေ့မဟုတ်ပေမယ့်မဟုတ်ရင်သူကအလုပ်ဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့်စက်ဘီးအသစ်တစ်ခုကိုသင်ဒီတစ်ခုကိုရပြီဆိုရင်ကွင်းဆက်အပိုတစ်ခုအဆင်သင့်လုပ်ပြီးပျော်မွေ့ပါစေ။ ငါမူကားဆောင်းပါးတို၏အဆုံးဖြစ်သည်။
သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်အားအောက်ပါအချက်များကိုအသိပေးပါ။ SRAM Eagle မောင်းနှင်မှုနှင့်အတူလမ်းကြောင်းများပေါ်တွင်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်မံတွေ့ရှိပါလိမ့်မည်။ ယောက်ျားတွေ, ရွှင်လန်းအားပေးပါတယ်။
SRAM ရဲ့နည်းပညာဆိုင်ရာလက်စွဲတွင်ဤအရာသည် 'a ကိုသုံးပါကွင်းဆက်တိုင်းတာရန် tool ကိုဝတ်ဆင်ကွင်းဆက်ဝတ်ဆင်နှင့်အစားထိုးကကွင်းဆက်က 0.8% elong ရောက်ရှိသောအခါ။ အသစ်တစ်ခုကိုအခါကက်ဆက်နှင့် chainrings အစားထိုးသင့်ပါတယ်ကွင်းဆက်ထည့်သွင်းပြီးဖြစ်သည် '12.09.2019
ဟေ့ငါ SRAM ကနေ Molly ပေါ့! ပြီးတော့ဒီနေ့ငါစက်ဘီးအသစ်တစ်ခုကိုဘယ်လိုအရွယ်အစားနဲ့ဘယ်လိုတပ်ဆင်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောပြမယ်။ သင်ဤကွင်းဆက်အဟောင်းကိုဖယ်ရှားလျှင်ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆိုင်းထိန်းစနစ်ချိတ်ဆက်မှု၊ ကွင်းဆက်အနိုင်အထက်ကိရိယာနှင့်ဆို့စ်ပလိပ်အသစ်များလိုအပ်လိမ့်မည်။ SRAM ကွင်းဆက်အရွယ်အစားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကိုလေ့လာကြည့်ကြစို့။ သင်သည်သင်၏ 1x, 2x သို့မဟုတ် 3x drivetrain တွင်ကွင်းဆက်ကိုလုံခြုံစွာအရွယ်အစားတပ်ဆင်နိုင်သည်။
drivetrains အားလုံးအတွက်၊ သင်၏အကြီးဆုံးကွင်းကွင်းနှင့် sprocket ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုကွင်း ချ၍ နောက်ကျော derailleur (သို့) ရှေ့ derailleur ကို ဖြတ်၍ မသွားဘဲနှင့်စွန်းများကိုအတူတကွဆွဲယူပါ၊ စက်ဘီးနှင့်မောင်းရထားပေါ်မူတည်ပြီးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းကွဲပြားပါသည်။ 1x, 2x, 3x နှင့် Eagle မောင်းနှင်သည့်ရထားများသည်ကွဲပြားခြားနားသောကွင်းဆက်အရှည်များလိုအပ်သည်။ ပိုင်ရှင်၏လက်စွဲစာအုပ်မှဤဇယားတွင်သင့်စက်ဘီးသည်အပြည့်အ ၀ ရပ်ဆိုင်းထားခြင်းသို့မဟုတ်အမာမာမာမာဆိုင်ကယ်ရှိသလားပေါ် မူတည်၍ drive အမျိုးအစားနှင့်ဘောင်အမျိုးအစားတစ်ခုစီအတွက်လိုအပ်သောကွင်းဆက်အရှည်အမျိုးမျိုးကိုသင်တွေ့နိုင်သည်။ 1 x Eagle drive နှင့်အပြည့်အဝရပ်ဆိုင်းမှုဘောင်မှအရွယ်အစားမီတာ။
အပြည့်အ ၀ ရပ်ဆိုင်းထားသည့်ဘောင်များနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်ဘောင်ချိတ်ဆက်မှုကိုအပြည့်အ ၀ လေဖြတ်ရန်ဖိအားပေးရသည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သင့်ရဲ့ကွင်းဆက်ကိုတိုလွန်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ ဆိုင်းထိန်းစနစ်ချုံ့သည်နှင့်အမျှစက်ဘီး၏ကွင်းဆက်အရှည်တိုးလာသည်နှင့်အမျှချည်နှောင်မှုတိုများသည် drivetrain သို့မဟုတ် frame ကိုအပြည့်အဝဖိအားပေးစေသည်။
ချိတ်ဆက်မှုကိုချုံ့ရန်သင်၏ဖိအားကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးသောအခါသင်၏အမ်မာမှထုတ်လွှတ်သောလေရှိသမျှကိုလွှတ်ပါသို့မဟုတ်ချိတ်ဆက်မှုအားလွတ်လပ်စွာလှုပ်ရှားနိုင်ရန်ခွင့်ပြုချက်ကိုဘောင်မှဖယ်ထုတ်ပါ။ အပြည့်အဝချုံ့ပြီးသည်နှင့်တုတ်များကိုသိုင်းကြိုး၊ အတွင်းပိုင်းပြွန်အဟောင်းသို့မဟုတ်အခြားအလုပ်ကိုလုပ်သည့်နေရာတွင်ထားပါ။ အပြည့်အ ၀ ဆိုင်းငံ့ထားသည့်ဘောင်တွင် Eagle မောင်းနှင်မှုလမ်းကြောင်းအတွက်ကွင်းဆက်ကိုတိုင်းတာရန်၊ ကွင်းဆက်၏အရှည်သို့ချိတ်ဆက်နှစ်ခု၊ အတွင်းနှင့်တစ်ခုအပြင်ကိုထည့်ရန်လိုအပ်သည်။
ဤနေရာတွင်ကွင်းဆက်အရှည်သည်သင်၏မောင်းနှင်မှုစနစ်နှင့်စက်ဘီးနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်ဖြတ်တောက်ခြင်းမပြုမီလုပ်ငန်းလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်ဆွေးနွေးပါ။ သင်အသုံးပြုနေသော chain breaker tool သည်သင်၏ကွင်းဆက်နှင့်သဟဇာတဖြစ်အောင်သေချာအောင်လုပ်ပါ။ ကွင်းဆက်အားဖြတ်တောက်သည့်အခါ PowerLock နှင့် PowerLink ကိုချိတ်ဆက်ရန်နှစ်ဖက်စလုံးမှအတွင်းဖက် link ကိုထားခဲ့ပါ။
သင်၏ထပ်နှင့်အဆက်အသွယ်များသည်ဆက်သွယ်မှုအလယ်သို့မဟုတ်ပြင်ပလင့်ခ်တစ်ခုသို့ရောက်သွားပါကသင်သည်ရှည်လျားသောဘက်တွင်မှားသင့်ပြီးအပိုကွင်းဆက်တစ်ခုအားနဂိုအတိုင်းထားခဲ့ပါကလိုအပ်လျှင်အပိုကွင်းဆက်ကိုအမြဲဖယ်ရှားနိုင်သည်။ တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီနောက်ဘက် derailleur ကိုအနိမ့်ဆုံးဂီယာသို့ရွှေ့ပါ။ သငျသညျအရှည်မှကွင်းဆက်ဖြတ်ကြပြီးလျှင်, ကွင်းဆက်အဆိုပါ derailleur ပန်းကန်နောက်ကွယ်မှသေချာအောင်, နောက်ဘက် derailleur လှောင်အိမ်နှင့်စက်သီးမှတဆင့်လမ်းပြ။
အကယ်၍ သင်သည်ဤပန်းကန်ရှေ့သို့သွားလျှင်ခြေနင်းသွားသောအခါကျယ်လောင်သောအသံကိုသင်ကြားရလိမ့်မည်။ နောက်ကျော derailleur ကိုအမြဲတမ်းပျက်စီးစေနိုင်သည် အကယ်၍ သင် 2x သို့မဟုတ် 3x system နှင့်အလုပ်လုပ်ပါကပတ်ပတ်လည်ကို install လုပ်ရန် derailleurs မှတစ်ဆင့်လမ်းကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်လည်ပတ်ပါ။ ကြိုးနဲ့ကက်ဆက်ပတ်ပတ်လည်မှာ PowerLink သို့မဟုတ် PowerLock ကို install လုပ်ပါ။ PowerLinks များကို 7, 8 နှင့် 9-speed chains များတွင်တပ်ဆင်ထားပြီးပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သည်။ PowerLocks များကို ၁၀-၊ ၁၁- နှင့် ၁၂- မြန်နှုန်းမောင်းနှင်မှုများနှင့် ၈-speed E-bikes များတွင်အသုံးပြုသည်။ ချည်နှောင်ခြင်းကိုတစ်ခါသုံးပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
အကယ်၍ PowerLock ကိုဖယ်ရှားလျှင်၊ သင်ကွင်းဆက်ကိုအစားထိုးသောအခါသင် PowerLock အသစ်တစ်ခုကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ PowerLocks အားလုံးတွင်မြှားတစ်ခုရှိပြီးအပြင်ဘက်မှကြည့်ရှုသောအခါသင်နင်းသောအခါကွင်းဆက်၏ရွေ့လျားမှုကိုဖော်ပြသည်။ ၎င်းသည် 12-speed Eagle မောင်းနှင်မှုဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အမြန်ကြိုးလမ်းကြောင်းအသစ်ကိုချိတ်ဆက်ရန် 12-speed Eagle PowerLock ကိုအသုံးပြုမည်။
PowerLock ကိုတပ်ဆင်ရန်ကွင်းဆက်၏အဆုံးတစ်ခုစီကိုအတူတကွဆွဲ။ ကွင်းဆက်၏ထက်ဝက်ကိုကွင်းဆက်၏လမ်းကြောင်းအတိုင်းညွှန်ပြသည့်မြှားနှင့်အတူတပ်ဆင်ပါ။ ကွင်းဆက်၏အခြားအဆုံးသို့ချိတ်ဆက်၏အတွင်းပိုင်းတစ်ဝက်ကိုထည့်ပါ။ အဆုံးသတ်နှစ်ခုစလုံးကိုတပ်ဆင်ပြီးသောအခါကွင်းဆက်၏အခြားအဆုံးသို့ချိတ်ဆက်၏အတွင်းပိုင်းတစ်ဝက်ကိုထည့်ပါ။
link link တဝက်ကိုဆွဲပြီးဆန့်ကျင်ဘက် link ၏ slot အတွင်းရှိ pins များကို align ဆွဲပါ။ PowerLock သည်ကွင်းဆက်မပြီးမချင်းယခု cranks ကိုဖွင့်ပါ။ မြှားသည်ခရီးသွားခြင်းကိုညွှန်ပြနေစဉ်စက်ဘီးကိုနေရာတွင်ထားကာနောက်ဘရိတ်လီဗာကိုဆွဲ။ ခြေနင်းပေါ်မြဲမြဲဖိထားပါ။ သင် PowerLock ကိုအပြည့်အဝထိတွေ့ဆက်ဆံနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံမြင်သည်နှင့်မြင်သင့်ပါတယ်။
ဆက်နွယ်မှုများလွတ်လပ်စွာရွေ့လျားနေဆဲနှင့် pinch ကြသည်မဟုတ်သေချာအောင်များ၏သေချာနှစ်ဖက်စလုံးကစစ်ဆေးပါ။ သင်၏ PowerLock သို့မဟုတ် PowerLink ကိုတပ်ဆင်ပြီးပါကကွင်းဆက်အားသေချာစွာသေချာစေရန်ဂီယာကိုဖြတ်ပါ။ အကယ်၍ သင့်တွင် suspension frame အပြည့်ရှိပါကသင်၏ shock ကိုပြန်လည်တပ်ဆင်နိုင်သည်သို့မဟုတ် inflate လုပ်နိုင်သည်။
အကြီးမားဆုံးကွင်းဆက်နှင့်ကက်ဆက်ကြယ်ပွင့်ရှိကွင်းဆက်ဖြင့်သင်သည် derailleur လှောင်အိမ်ကိုရှေ့သို့ရွေ့လျားနိုင်ပြီး၎င်းသည်အပြည့်အဝတိုးချဲ့ခြင်းမရှိကြောင်းသင်စစ်ဆေးနိုင်သည်။ အကယ်၍ ၎င်းသည်အပြည့်အ ၀ တိုးချဲ့ပြီးပြီဟုသင်တွေ့ရှိပါကသင်၏မောင်းနှင်မှုအားထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှကာကွယ်ရန် PowerLocks မျိုးစုံပါသောကွင်းဆက်တစ်ခုထပ်ထည့်ရန်လိုအပ်နိုင်သည်။ ထိုအတိုင်း! သင်၏ powertrain ကိုဘယ်လိုညှိရမလဲနှင့်ပတ်သက်သောညွှန်ကြားချက်များကိုသင်၏ပိုင်ရှင်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက်ပိုင်ရှင်၏လက်စွဲကိုကြည့်ပါ။
စက်ဘီးဂီယာပြောင်းမှုကိုရပ်ကွက်ထဲတွင်နေရာချထားပြီးသည်နှင့်သင်၏ SRAM ကွင်းဆက်အသစ်ကိုစီးရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေသည်။ သင်၏ SRAM ကွင်းဆက်အားမည်ကဲ့သို့သန့်ရှင်းရေး၊ ထိန်းသိမ်းရန်နှင့်မည်သည့်အချိန်တွင်မည်ကဲ့သို့အစားထိုးရမည်ကိုလေ့လာရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ drivetrain သန့်ရှင်းရေးဆောင်းပါးကိုကြည့်ပါ။ ကြည့်ရှုသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
Theလင်းယုန်ကားမောင်းသူလုပ်တယ်အဖြစ်ကောင်းစွာ crankset ရှိသည်, ဒါပေမယ့်ဟုတ်တယ်နှင့်တပ်ဆင်ရန်မဖြစ်မနေမဟုတ်ပါလင်းယုန်ကားမောင်းသူ။ Theလင်းယုန်cranksလုပ်တယ်သို့သော် GXP model ကိုအသုံးပြုပါကကွဲပြားခြားနားသော chainring ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိသည်။တိုးတက်မှုသို့မဟုတ်မဟုတ်တိုးတက်မှု။ Theတိုးတက်မှုကွင်းဆက်တွင် 3mm offset ရှိသည်။တိုးတက်မှု6mm offset ရှိပါတယ်။09.05.2019
SRAM NX တွင် clutch ရှိပါသလား။
အဆင့်မြင့် derailleurs နှင့်အမျှသည်NX မှာရှိတယ်ညှိနှိုင်းကလောင်မြင်းစီးသူရဲတွေလှော်ခတ်လမ်းကြောင်းတွေစီးနေတယ်ဆိုပါစို့။31 2017 ။
GXကြာရှည်~ ၈၀၀ မိုင်X01 အများကြီးပိုကြာရှည်ခံသည်။၅ ။ 2019 ။
Shimanoနှင့်အရှက်ကွဲခြင်းနှစ် ဦး စလုံးအရည်အသွေးမြင့်ထုတ်ကုန်များလုပ်ပေမယ့်သူတို့ရဲ့ချဉ်းကပ်မှုနှင့်စတိုင်များကွဲပြားခြားနားပါသည်။ လက်ရှိအစိတ်အပိုင်းရှုခင်းကိုကြည့်ပါကပြောနိုင်ပါသည်Shimanoယေဘုယျအားဖြင့်နှစ်ခုပိုမိုရှေးရိုးစွဲဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်အတွင်းအရှက်ကွဲခြင်းပိုပြီး aggressive drivetrain ဆန်းသစ်တီထွင်မှုကိုလိုက်။ သိရသည်။
SRAM Eagle အတွက်ဘယ်အချက်ကိုလိုအပ်ပါသလဲ။
GX နှင့်အထက်aကိုသုံးသည်အရှက်ကွဲခြင်းတိကျတဲ့ XD ကားမောင်းသူနောက်ဘက်အချက်အချာ။ NX 12 အမြန်နှုန်းသည် splim Shimano နှင့်လိုက်ဖက်သည်အချက်အချာ။ သင့်ရဲ့ဘောင်ပေါ်မူတည်ပြီး 148 အများဆုံးမြှင့်တင်ပါ။ frames များကိုအဟောင်းတွေအတွက်ရည်ရွယ်ပေမယ့်အချက်အချာsplined 8,9,10 နှင့်အတူစံချိန်စံညွှန်းများအရှက်ကွဲခြင်းသို့မဟုတ် Shimano ယာဉ်မောင်းအလောင်းများအလိုတော်အလုပ်။
အကောင်းဆုံး SRAM Eagle Mountain ဆိုင်ကယ်ဆိုတာဘာလဲ
SRAM Eagle တောင်တက်စက်ဘီး - မောင်းနှင်မှုအစီအစဉ်တွင် XO1 သည်အလယ်တွင်ထိုင်လျက် XX1 အထက်နှင့် GX အောက်တွင်ရှိသည်။ 1x12 groupset သည်ကုမ္ပဏီ၏ 1x11 တောင်တက်စက်ဘီးအုပ်စုများ၏အခြေခံစံနှုန်းကိုတည်ဆောက်ထားသော်လည်းအနည်းငယ်အကွာအဝေးဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ ၎င်းကိုအပေါ့ဆုံး XC စက်ဘီးများမှအစ burliest enduro စက်ဘီးများအထိတွေ့နိုင်သည်။
SRAM GX Eagle တွင်ဘယ်လိုမောင်းနှင်မှုမျိုးရှိပါသလဲ။
ဤသည် SRAM GX Eagle မောင်းနှင်မှု၏ကျွန်ုပ်တို့၏ရေရှည်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုဖြစ်သည်။ တတ်နိုင်သောစျေးနှုန်းဖြင့် ၁၀-၅၀ တန်ကက်ဆက်တစ်လုံးပါသည့် single-ring 12-speed drivetrain ။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကစတင်ခဲ့သော 12-speed-wide-range gear သို့ SRAM XO1 Eagle groupset သို့ပထမဆုံးချဉ်းကပ်မှုသည် single-ring ဈေးကွက်တွင်တစ်ခါမျှမကြားဖူးသောဂီယာအမျိုးအစားကိုယူဆောင်လာသည်။
SRAM Eagle သည်မည်သည့် clutch အမျိုးအစားကိုအသုံးပြုသနည်း။
SRAM သည် clutch ၏ကန ဦး လှုပ်ရှားမှုကိုပျော့ပြောင်းစေခဲ့သော်လည်းချည်နှောင်မှုကျဆင်းခြင်းသည်ဤတစ်ခုတည်းမောင်းနှင်မှုနှင့်ပြaနာမဟုတ်သေးပါ။ ၎င်း၏ Type3clutch အသစ်သည်အစပိုင်းတွင်ပိုမိုပျော့ပြောင်းပြီးသင်က၎င်းကိုအောက်သို့ရွှေ့ပြောင်းရာတွင်များစွာတိုက်ခိုက်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ သို့သော်လင်းယုန်၏ပြောင်းကုန်ပြီအရည်အသွေးကိုအခြား drivetrain ကဲ့သို့ cable ကိုပွတ်တိုက်အားနည်းတူဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။